TRUESTORY: လက်မှတ်ထိုးသူနည်းသည်ဟုဆိုကာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒပြ
လက်မှတ်ထိုးသူနည်းသည်ဟုဆိုကာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒပြ
From : ..mizzima
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ထိုးသူနည်းသဖြင့် အားလုံး ပါဝင်လာရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့
အစည်းတို့ဦးဆောင် ပြီး ဇူလိုင် ၁၂ရက်က သာယာဝတီခရိုင်ရှိ ဇီးကုန်းမြို့ခံများ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ထင်သလောက် ခရီးမပေါက် ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဇီးကုန်းမြို့မှာ လက်မှတ်ထိုး စာရင်းတွေလည်း နည်းနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် အားလုံးပါဝင်လာအောင် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ဟောပြော ပွဲကိုလုပ်ရတာ ပါ”ဟု (၈၈)မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဆောင်ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်သူ ကိုသန်းအောင် က ပြောသည်။
ဇီးကုန်းမြို့နယ်တွင် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် ၅ခု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၉ခုရှိပြီး လူဦးရေ ၆၆၉၉၁ဦး နေထိုင် လျှက်ရှိ သည်။ ထိုအထဲတွင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ လေးသောင်းခွဲကျော် ရှိသော်လည်း ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ထိုး သူဦးရေ ၁၃ဝဝဝ ကျော်သာရှိသေးသည်။
အဆိုပါ ဇီးကုန်းမြို့နယ်မှာ ဒု-သမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့၏ ဇာတိဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြသူများက မနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ဇီးကုန်းမြို့နယ်၊ မင်းဘူးလမ်း နှင့် ကံကြီးထောင့်လမ်း တွင် စုဝေးပြီး ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ကာ ဂုံးလမ်း ၊ ကုန်သည်လမ်း ၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း ၊ ဘုရား လမ်း ၊ ဦးယောလမ်းအတိုင်း ချီတက်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
ဆန္ဒထေုတ်ဖော်ရာတွင် “၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဒို့အရေး”၊ “ ပုဒ်မ၄၃၆ ပြင် ဆင်ရေး ဒို့အရေး”၊ “ပုဒ်မ ၅၉(ဃ) နှင့် ၅၉(စ) ဖျက်သိမ်းပေးရေး ဒို့အရေး” “ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနှင့် မညီညွတ်သော ပုဒ်မများ ပြင်ဆင်ရေး ဒို့အရေး”၊ “တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အား ကိုယ်စားပြုသော အခြေခံဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေး ဒို့အရေး” စသည့် ကြွေးကြော်သံ များဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ရာခိုင်နှုန်းကျော်က သဘောတူပြီးနောက် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပ၍ မဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော် ဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ရမ ည်ဟု ပြဌာန်းထားသည် ပုဒ်မ ၄၃၆ကို ပြင်ဆင်ရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံအဝှမ်း ဆန္ဒပြုလက်မှတ်များကောက်ခံလျက်ရှိသည်။
ဒုဝန်ကြီးပြောတဲ့ လုံခြုံရေးဆိုတာ ဘာလဲ ... ?
အပြစ်မရှိဟု မီဒီယာအချို့အော်နေသော်လည်း လိပ်ပြာမလုံ...
အရက်သမားဉာဏ် တထွာလောက်ကတော့ တက်မလာနဲ့စည်သူအောင်မြင...
DVB သတင်းထောက် လဲ့လဲ့မွန် လူပါး မဝလေနဲ့
ကမ္ဘာ့ သြဇာအရှိဆုံး အယောက် ၁၀၀ စာရင်းတွင် နိုင်ငံတေ...
မြန်မာ မီဒီယာများအပေါ် ပြည်သူတို့၏ အမြင်များ (လူထုအ...
အတိုက်အခံ အုပ်စုတွေဟာ … တိုင်းပြည်အပေါ် တကယ်ပဲ စေတန...
သတင်းထောက် ကဒ် မပါသည့် DVB သတင်းထောက် လေးလေးမွန် အ...
ဗိုလ်ချုပ်သေဆုံးသည့်နေ့ ပျော်ရွှင်ကြသူများ ဓါတ်ပုံ ...
ရှမ်းမြောက်တွင် အစိုးရတပ်နှင့် TNLA တို့ တိုက်ပြွဲ...
လုပ်ချင်နေတာတော့ ကြာပြီ ဒီရက်မှာမှ အဆင်ပြေလို့ လုပ...
မန်းလေး ဖြစ်စဉ်ကို …. မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေသူတွေအတွက်...
ရိုဟင်ဂျာဟူသောအသုံးအနှုန်းကို UN နှင့် နိုင်ငံတကာအသ...
သံဃာတော်များ၊ တပ်မတော်သားဟောင်းများနှင့် ကြံ့ခိုင်...
"သူရေးတဲ့သတင်းထက် သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် အရေးယူတာ။ ဒ...
ဘယ်ကစမ်းမလား ညာက စမ်းမလားဟု စိန်ခေါ်လိုက်သည့် ဘူးလက...
NLD ပါတီ ဘာတွေ မှားနေသလဲ (မောင်မောင်ကိုကြီး၊ The M...
လူ ၃၀၀ နီးပါး သေဆုံးခဲ့သည့် မလေးရှားလေယာဉ် ပျက်ကျမ...
OIC အပါအ၀င် ပြည်ပအထောက်အပံ့ ရယူထားသော မီဒီယာများသတ...
ကုလ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စယန်ဟီလီ မြန်မ...
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသား လူငယ်တစ်ယောက် ဆီ...
ရန်အောင် - တိမ်လွှာမို့မို့လွင်
KIA ဖမ်းဆီးထားသော ဆင်းရဲနွမ်းပါး တံငါသည် ဒေသခံ (၁၀...
စစ်တွေတွင် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်သဖြင့် လူတစ်ထောင်ကျေ...
အပြစ်က အပြစ်၊ ကျေးဇူး က ကျေးဇူး
အာဇာနည် နေ့ အကြို ကာတွန်း
ရေကြီးနိုင်သည့်အလားအလာများရှိနေသောကြောင့် ဟင်္သာတ၊ ဇ...
"မိမိတို့ ဖက်မှ ပြင်ဆင်အားထုတ်မှု များ ညီညီညွတ်မ...
"သတင်းသမားဖြစ်ပြီး ဥပဒေကို သိလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မသိလ...
အိမ်အကူကို အဓမ္မပြုကျင့်သည်ဟုဆိုကာ နိုင်/ကျဉ်းဥက္ကဌက...
တို့ဗမာ သီချင်း ( တိုက်ပွဲခေါ်သံ ရုပ်ရှင်မှ )
သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များထံမှ ၀မ်း...
မီဒီယာဟာ Enemy of the State ဖြစ်လာပြီလား
တိုင်းရင်းသားပါတီပေါင်း (၂၀) မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
ယူနတီ ကိစ္စမှာ သတင်းထောက်တွေ နိုင်ငံသားပီသရင် ဒီလို...
တွေ့မြင်သမျှ အများပြည်သူ မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်း
ယူနတီဂျာနယ်သတင်းထောက်လေးဦးနှင့် စီအီးအိုကို အလုပ်...
နောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်သူမှာ အာဏာမရသောပါတီနှင့် မီဒီ...
လက်မှတ်ထိုးသူနည်းသည်ဟုဆိုကာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ဆ...
၂ဝ၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ ဂျာမနီ ဗိုလ်စွဲ (full hi...